Madaxweyne Xasan oo ku qanci weysan xil ka qaadista Sanbaloolshe – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 8 September 2014 9 September 2014
Mareeg.com: Warar lagu kalsoon yahay oo laga helay madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegaya in Madaxweynaha dowlada Federaalka Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamud uu ka biyo diidsan yahay inuu aqbalo xilka qaadista lagu sameeyey Agaasimihii hore Nabad Sugida dalka, C/laahi Maxamed Cal Sanbaloolshe oo ay shalay wasiiradu xilka ka qaadeen.
Wararka laga helayo Madaxtooyada Somaaliya ayaa sheegaya in markii Madaxweynaha uu maqlay Xilka qaadista Sanbaloolshe uu ka carooday uuna tilmaamay in ay ku deg degeen Golaha wasiirada Xilka Qaadista uuna qaadhacayo.
Ka hor imaadka xilka qaadista Sanbaloolshe oo ahaa Agaasimaha Nabad Sugida Dalka ee Xasan Sheikh uu kaga hor yimid ayaa dhalisay khilaaf cusub oo dhexmaray dowlada dhexdeeda iyadoona hada ay Madaxtooyada ay ka socdaan shirar lagu xalinayo khilaafkan oo sababi kara in ay sii balaarato.
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa la sheegay iney u tageen madaxweynaha, iyagoo doonaya inuusan ka hor imaan xil ka qaadista Golaha Wasiiradu ku sameeyeen Sanballoolshe, si loo fogaado khilaafka madaxda sare ee dalka.
Xildhibaano kale ayaa la sheegay iney dhankooda Madaxweyne Xasan usheegay inuusan ku qancin xilka qaadistii lagu sameeyey Agaasimihii Hay’ada Sirdoonka Soomaliya C/llaahi Sanbalolshe.
Waxa la filayaa in kulan gaar ah Arintaan ka yeeshaan Madaxweynaha iyo R/wasaaraha Soomaaliya kadibna la ogaan doono waxa kasoo baxa.
Maalmahan dambe waxa jiray khilaaf warbaahinta ayasan shaacin ayaa ka dhex jiray Madaxweyne Xasan & R/wasaare C/weli Shiikh Axmed Maxamed.
Guddiga Amaanka baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay Muqdisho ayaa soo dhaweeyey xil ka qaadista agaasimihii Hay’adda Nabad Sugidda C/laahi Maxamed Cali Sanbaloolshe.